ကျန်းမာရေးအတွက် ကြံရည်တစ်ခွက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြံပင် ကို အင်္ဂလိပ် လို Sugar Cane လို့ခေါ် ဆိုကြပါ တယ်။ ကြံသကာ ကိုတော့ Sugar Cane Candy လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ကြံသကာကို မုန့် များ၊ ယိုများ၊ တဆေး (ဝါ)ဆေးယို တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုလေ့ ရှိကြ ပါတယ်။ ကြံသကာဆိုသည်မှာ ကြံရည် ကို ချက်၍ရသော အခဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြံသကာနှင့် ဆေး အဘိဓာတ် ကျမ်း အမြင်
ကြံသကာ၏ ဂုဏ်သည်ကား အပူလွန်၍သော်လည်းကောင်း၊ နှလုံး ဆို့တောင့်လာ၍သော်လည်းကောင်း၊ သည်းခြေလှိုက်တက်၍သော်လည်း ကောင်း၊လေပူထ၍သော်လည်းကောင်း၊ ရူးသွပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ အာပေါ ဓာတ်ပျက်သော အနာကိုသော်လည်း ကောင်း၊ အလွန်ကျုံသောအနာကို လည်းကောင်း၊ သလိပ် အဓိကပြု ၍ ချောင်းဆိုးသောအနာကိုသော်လည်း ကောင်း ချမ်းသာစေတတ်သည်ဟု ပြဌာန်းထားပါတယ်။
နွေရာသီ အတွက် ဖျော် ရည် တစ်ခွက်
ကြံပင်ကို သဘာဝပေါက်ပင်နှင့် စိုက်ပျိုးပင်အဖြစ် တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြံညိုပင်၊ ကြံနီပင်၊ ကြံဖြူပင်ဟု ကြံ အမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ ကြံပင်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာပြန် အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းကြီးများ တွင် အောက် ပါ အတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြံညိုပင်သည် ပြေပြစ်၏။ ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်မှာ သုက်ကိုပွားစေသည် ။ နှစ်မြို့စေသည်။ အပူကိုတားမြစ်စေ သည်။ သလိပ်ဖြစ်စေတတ်သည်။
အနာပေါက်ရောဂါနှင့် မြစ်ခြောက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်း စေသည်။ ကြံနီပင်သည် ချို၏၊ဖန်၏၊အေး ၏။ ဝိပါက ချိုစေ၏။ သုက်ကိုပွားစေ တတ်၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အရောင်အဆင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ဓာတ်တို့ကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက် ခဲ၏။ လေ၊ သည်းခြေတို့ကို ငြိမ်းအေး စေတတ်၏။ အနာ၊ မီးလျှံ၊ အပူနာ၊ ဆီးချုပ်၊ ဆီးအောင့်၊ သွေးဖောက် ပြန်ခြင်းတို့အတွက် အကျိုးရှိ၏။ ကြံဖြူပင်သည် ချို၏၊ ပြေပြစ်၏၊ ဝဖြိုးစေသည်။ အသက်ကိုရှည်စေ သည်။ သုက်သွေးကို ပွားစေသည်။ သလိပ်ကို ပြုတတ်၏။ ပင်ပန်းခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း၊ သွေးကျခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်းရှိ အပူတို့ကို ငြိမ်းအေးစေ တတ်ပါသည်။
နွေရာသီတွင် ကြုံတွေ့ရ တတ်သည့် နှလုံးခုန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း တို့အတွက် ကြံရည်သည် အဖိုးတန် ဖျော် ရည် ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကြံရည်တွင် သံပရာသီးအနည်းငယ် ထည့်သွင်း၍ သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ကြံရည်၏ အရသာကို ပိုမိုလေးနက် စေပါတယ်။ ကြံရည်နှင့်ပတ်သက်၍ Dr. S.J. Singh ပြုစုသော Food Remedies စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားချက် အချို့ကို တိုင်းရင်းဆေးစာဖတ်သူ များ သုတြွကယ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကြံရည်သည် များစွာသောအဖျော်ယမကာတို့အနက် ရေငတ်ပြေစေသော၊ လန်းဆန်းစေ သော အာနိသင် ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ယင်းတွင် သကြားဓာတ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဗီတာမင် B နှင့် ဗီတာမင် C တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Organic Salts of Calcium ၊သံဓာတ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်တို့ြွကယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
ကြံရည်ကို သွေးအားနည်းရောဂါ၊ အသားဝါရောဂါ၊ ကြို့ထိုးခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအပူဓာတ်ကို လျှော့ချရာ တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသား များ သုက်ယိုရောဂါ Spermatorrhoea ကိုကုသရာတွင် အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ကြံရည်တွင် ရှောက်ရည် (Limes)၊ သံပရာ(Lemon )နှင့် လိမ္မော်ရည် (Oranges) တစ်မျိုးမျိုးကို အနည်း ငယ်ထည့်ပြီးသောက်သုံးပါက အာ ဟာရပြည့်ဝကာ ပိန်သူကို ဝကာ အလှတိုးစေပါတယ်။
ဆေးဝါးဖြစ်သော ဖျော ရည်
ကြံပင်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရှင်သန်ပေါက်ရောက်တတ်သောအပင် မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကြံ ရည်ကို တစ်နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးကမ္ဘာ့ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များ
ကြံရည်တွင် ဗီတာမင်B အပြင် ကယ်လိုရီများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ လူ တိုင်းအတွက် သင့်လျော်သော သဘာဝဖျော်ရည်ကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝဖျော်ရည်ဖြစ်တဲ့ ကြံရည် ကို နေ့စဉ်သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏအတိုင်း သောက် သုံးပေးခြင်း ဖြင့် ခေါင်းကိုက်ရောဂါဝေဒနာရှင်များ နဲ့ အစာအိမ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များ အတွက် အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိ ကြောင်းကို သုတေသနပြုမှုများမှာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ဗြိတိသျှသုတေသနပညာရှင် များရဲ့ တွေ့ရှိ ချက် အရ ကြံရည်သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဆဲလ်များရှင်သန်မှု ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေသည့်အပြင် အချို့ လူများ တွင်ဖြစ်တတ်သော မှတ်ဥာဏ် ချို့ယွင်းမှုများကိုလည်း အထိုက် အလျောက် အကာအ ကွယ်ပေးနိုင် ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကြံရည်ကို သီတင်းတစ်ပတ်လျှင် သုံးခွက်မျှ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် နာ့ဗ်ကြော များ သန်မာမှုကို အထောက် အကူပြုစေပါတယ်။
ထို့အပြင် အာရုံ ကြောအားနည်းမှုရောဂါကို သက်သာ စေ သည့် အာနိသင်ရှိသည်ဟု ဆို ထားပါတယ်။
(၁) မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ် သတင်းစာ
(၂) အရှင်နာဂသိန် အခြေပြုဆေးအဘိဓာန်
(၃) Food Remedies. By. Dr.S.J.Singh